Izindaba Zamahhashi | Amahhashi eNoti
Umhlaba wehhashi uyajabulisa futhi ngalokhu kuyacaca kithi ukuthi kuningi izindaba ngale ndaba. Kulesi sikhala uzothola zonke izinhlobo zezindaba eziqoqwe ngokucophelela ukuze uzijabulele futhi ube nolwazi lwakamuva oluphathelene nalezi zilwane.
Izindaba, amathiphu ngisho ama-anecdotes ahlobene namahhashi. Futhi uma sikhuluma ngezindaba sisho ukuthi kunemikhakha eminingi ebhekise kuyo emhlabeni wamahhashi, ezemidlalo, ama-Olimpiki, ukwelashwa, imiphumela nokunye okude njll. Lokho kuzojabulisa abalandeli balo mhlaba, okuthi yize ubiza kancane Kuzohlala kusishiyela imizwa emihle.
Ngeke sikhohlwe ukuthi kunenketho ye- phawula ezindabeni zehhashi ngalinye futhi kulesi sikhala esithile kungumbono omuhle ukukwazi ukunikeza umbono wethu.
Kubiza malini ukugcina ihhashi ngenyanga
Por UMonica sanchez kwenza iminyaka 4 .
Ngabe ucabanga ukuzuza ihhashi? Ngaphambi kokwenza noma yini, kubalulekile ukuthi wazi ukuthi kubiza malini ukuyigcina isesimweni esihle, ...
Alala kanjani amahhashi?
Amahhashi, njengazo zonke izilwane futhi ikakhulukazi izilwane ezincelisayo, adinga ukuphumula. Kepha uma kungokokuqala ...
Ihhashi lokuqala, iHyracotherium
YiHyracotherium, ihhashi lohlobo lohlobo lwezilwane ezincelisayo ze-perissodactyl, nazo ezifanayo ...
ULucy Rees, ukuvelela kwezwe lamahhashi
ULucy Rees udabuka eWales futhi uthathwa njengophakeme emhlabeni wamahhashi. Lona wesifazane o ...
Impilo yesibili yamahhashi amadala
Por U-Angela Graña kwenza iminyaka 8 .
Ubuciko ngezikhathi zobunzima buba semfashinini kakhulu, ngoba akulula ukuthenga izicucu ezibizayo ...
Amahhashi eBreyer aqoqekayo
IBreyer yinkampani yaseMelika, eyazalelwa eChicago, ezinikele ekwakhiweni kwezinombolo zamahhashi azoqoqwa. Lezi…
Ungaligibela Kanjani Ihhashi le-Paso Fino
Por isithombe kwenza iminyaka 10 .
Amahhashi amahle e-paso akulula ukuwagibela, kunalokho adinga ukunakekelwa okukhethekile ohlangothini ...
Amahhashi abashushumbisi bezidakamizwa baseMexico banqoba imijaho e-United States
Izwe lomjaho wamahhashi belilokhu lisolwa, ezimweni eziningi kukhulunywa ngama-mafia noma amathonya ...
Ithiphu entsha yokunqoba ukwesaba ukugibela ihhashi
Uthando lwamahhashi luyinto yonke, futhi abantu abaningi bakholelwa ukuthi okuphambene yinto ephuka ...
Izindlela zokuba umgibeli omuhle
Akungabazeki ukuthi esinye sezikhiye ezibaluleke kakhulu ekubeni umgibeli omuhle sihlobene ...
Kufanele ngaso sonke isikhathi sicabange ukuthi amahhashi yizilwane ezithakazelisa kakhulu, kepha kuzo zonke izimo zinobuntu ...
Isimo samanje samahhashi emhlabeni
Umlando wokwenqatshelwa kokudla inyama yamahhashi e-Argentina
Ungakugwema kanjani ukukhubeka kwamahhashi
Uyini irekhodi eleqayo ekugibele amahhashi